~ ဏီလင်းညို ~: ဒုက္ခကိုယ်စီ
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 5:23 PM
အင်း ဒုက္ခ ဒုက္ခ ဒုက္ခ ...
ကြီးမားလှစွာသော ဒုက္ခကိုယ်စီနှင့်ပါတကား ...
မတွေ့တာကြာပြီ ဏီလင်းရေ ... မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုက္ခ ဖြစ်စဉ်ထဲ စီးမျောနေတယ်လား ... :)
မိုးအေးအေးမှာ အတွေးတယ်ကောင်းပါ့လား ဏီဏီ..ဟင်။
ဟုတ်ပအေ ဒုက္ခ ကိုယ်စီပါဘဲ...
ဒါနဲ့ သက်တံဆယ်စင်းထွက်ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ် အစင်း သုံးဆယ်ရော ထွက်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလား အေ :))
မတွေ့ တာကြာပြီ ကိုဏီ.
ဒုက္ခကိုယ်စီ လေးဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတယ်.
ချိုမြိန်ဒုက္ခလေးပါ ကိုဏီရာ။ ;)
မလေး နံနက်စီးစီးစောစော ဖတ်သွားတယ်..း))
လည်လည် လာပြီး ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ ..း))
လူတိုင်း ဒုက္ခကိုယ်စီပါလားနော် :D
လာလည်သွားပါတယ် ကိုလင်းရေ :)
ဒုက္ခကိုယ်စီတွေကို ဒုက္ခတွေရှိသူတယောက်က ဖတ်သွားကြောင်းဗျား..ကိုဏီ နေကောင်းတယ်မလားဗျ..
ခင်ဗျားရဲ့ ဒုက္ခကို အခုမှာလာကြည့်ဖြစ်တယ် ဗျာ့
မတွေ့တာကြာပီ ဘလော့မှာပြောပါတယ်း)
လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေတဲ့..
ဒါလေးများ ပါးပါးလေးပါ... :)
နေကောင်းကျန်းမာစွာ စာတွေ ဆက်ရေးပေးပါ ကိုဏီ..
အမှန်တွေ ဘာလို့ ချပြရတာလဲအကို...:)